काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत यो शुक्रबारबाट तीन वटा चलचित्र दर्शकमाझ आएका छन् । सञ्चारकर्मी संगीता श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘कथा काठमाण्डू’, अर्का सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘अनुराग’ र गायक तथा संगीतकार यश कुमारद्वारा निर्देशिक चलचित्र छिरिङ दर्शकमाझ प्रदर्शनमा आएका छन् । यो साताको भिडन्तलाई हेर्ने हो दुई सञ्चारकर्मीसँगै गायकको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुने […]
काठमाडौं । अंग्रेजसँगको युद्व नालापानीको युद्वको कथालाई मुख्य आधार बनाएर निर्माण गरिएको चलचित्र नालापानीको टिजर निर्माण पक्षले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो । टिजरमा मेकिङ निकै लोभलाग्दो देखिएको कार्यक्रममा उपस्थित भएकाहरुले बताए । टिजरले फिल्मको प्रतिक्षा गराउने पक्का छ । सन् १८१४ मा देहरादुनस्थित नालापानी गढीमा भएको अङ्ग्रेज–नेपाल युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट कप्तानी […]
विकाशको नयाँ प्रोजेक्टमा स्वस्तिमा पक्का
काठमाडौं । अहिलेकी चर्चित नायिका स्वस्तिमा खड्का सफल निर्माता तथा निदेर्शक विकाशराज आचार्यको नयाँ प्रोजेक्टमा देखिने पक्का पक्की भएको छ । ‘कुटुमा कुटु’ गीतको लोकप्रियता र ‘छक्का पञ्जा २’ सुपरहिट भएपछि नेपाली चलचित्रमा स्वस्तिमाको हाइप एकाएक बढेको हो । पाँचौ हप्तामा प्रदर्शनरत ‘नाईं नभन्नू ल ५’ हिट भएपछि त उनको डिमाण्ड झन बढी चुलिएको छ […]
कसलाई रोज्ने सृष्टि कि साम्राज्ञी ?
धिरज र आकाश आशावादी काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत शुक्रबारबाट दुई चलचित्र ‘इन्टुमिन्टु लण्डन’मा र ‘बाँध मायाले’को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । दुवै चलचित्र दर्शकका लागि प्रतिक्षित छन् भने निर्माण पक्ष पनि चलचित्रबाट निकै आशावादी देखिएको छ । लगानीका हिसाबले यी चलचित्रले कत्तिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुन् त्यो भने केही दिनको व्यापारिक रिपोर्ट सार्वजनिक […]
नीताको ‘पञ्चायत’ ओस्कारमा छनोट
काठमाडौं । आगामी ओस्कार अवार्डमा नेपालबाट फिल्म ‘पञ्चायत’ भिड्ने भएको छ । सन् २०१९ फेब्रुअरी २४ तारिख आइतबारका दिन अमेरिकाको लस् एन्जेलसको डल्बी थिएटरमा हुने ९१ औं ओस्कार समारोहमा उक्त फिल्मलाई ‘उत्कृष्ट विदेशीभाषी फिल्म’ को विधामा भिड्न नेपालबा छनोट गरिएको हो । अमेरिकाको एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेस (अम्पास) द्वारा मान्यताप्राप्त नेपाल छनोट […]
‘अनुराग’ टोलीको व्यस्तता बढ्यो
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको राम्रो प्रचार प्रसार हुन थालेको छ । चलचित्र प्रदर्शन अगावै निर्माण पक्षले दर्शक बटुल्न निकै दुःख कष्ट व्यहोर्नुपर्छ । अहिले ट्रेण्ड नै बसिसक्यो । अन्यथा कुन चलचित्र कहिले चल्छ ? अत्तो पत्तो नहुने अवस्था पनि हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर एउटै मितिमा धेरै चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याइमा त्यसको मार निर्माता तथा […]
‘छक्का पञ्जा ३’ पहिलो पोस्टरमा पाँच कलाकार
काठमाडौं । चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ को पहिलो पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको पोस्टरमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु दीपक राज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, दीपिका प्रसाईँ, बुद्धि तामाङलाई फिचर गरिएको छ । पोस्टर सार्वजनिक गरेसँगै चलचित्र टीमले ट्रेलर सार्वजनिक मिति समेत सार्वजनिक गरेको छ । चलचित्रकी निर्देशक दीपाश्री निरौलाका अनुसार […]
काठमाडौं । नेपाली फिल्म अवार्डले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ । ‘राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई दिने’ प्रवृति मौलाउँदा अवार्डप्रति चलचित्रकर्मीको मात्र नभएर आम दर्शकहरुले समेत अवार्डप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । वास्तवमा अवार्ड उत्कृष्ट मध्येबाट उत्कृष्टलाई प्रदान गरिनु पर्ने हो तर नेपाली अवार्डमा त्यो नियम लागू नभएको अवस्था देखिएको छ । अचेल त अवार्ड पनि वर्षमा […]
काठमाडौं– नेपाल भ्रमणका क्रममा बलिउड अभिनेता गोविन्दाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । एलजी सिने सर्कल अवार्डमा सहभागी हुन गत शनिबार नेपाल आएका गोविन्दले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । उनी […]
‘अनुराग’को कलेज क्याम्पियन शुरु
काठमाडौं । प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘अनुराग’ टिमले कलेज क्याम्पियन शुरु गरेको छ । राजधानीका विभिन्न कलेजमा कलाकार पुगेर चलचित्रको प्रचार प्रसारलाई तिव्र पारिएको प्रस्तुतकर्ता ऋषि धमलाले बताए । चलचित्रका टिम आइतबार बिहान जोरपाटीस्थित समता कलेज पुगेका थिए भने सोमबार कौसलटारस्थित जनप्रेमी कलेज पुगेको नायिका एलिजा गौतमले बताइन् । नायिका एलिजा गौतम, नायक समुन्द्र पण्डित, […]